> Resource > iPad > Sida loo Guba mini iPad 2 videos in DVD
iPad mini 2 yimaado iyadoo labo kamaradaha, a hore jeeda mid ka mid ah oo gadaal u jeeda mid ka mid ah. Oo waxaa qaadan kartaa 1080p video. Sidaas, iPad mini 2 waxaa loo isticmaali karaa sida fiidiyo protable weyn in ay qaataan videos ama sawiro. Haddii aad qabto mini iPad ah 2, ayaan Laabta ku odhan, oo aad u jeclaan doonaa video awood ah iPad mini 2 iyo aad u isticmaali doonaa in ay qaataan videos iyo sawiro meel kastoo aad tagtidba. Oo markii aad lahayd tan ah videos iyo sawirro ku saabsan qalab aad, waa fikrad weyn oo aad u gubi mini iPad 2 videos in DVDs (sawiro ka mid ah) ee loogu talagalay badbaadinta meel lagu kaydiyo dheeraad ah si ay u qaataan in ka badan videos iyo weligiisba sii daqiiqado ku faraxsanahay. Taasi goolka kaliya inaan maqaalkaan qoro. Halkan, waxaan ku tusi doonaa sida loo gubi mini iPad 2 videos in DVD xirfadle-raadinta la talaabooyin yar oo sahlan.
Marka hore, ha ii soo bandhigo awood leh oo muhiim ah iPad mini 2 ilaa DVD gubi - Wondershare DVD abuuraha ( DVD Creator for Mac ). Wuxuu ku siinayaa qalab video tafatir ku dhowaad dhammaan lagama maarmaan ah sida beerista, falinjeeerka, qoqobada, watermarking iwm ayaa la heli karaa, iyo sidoo kale wax badan oo lacag la'aan ah oo qurux badan arrimo DVD menu in aynu aad doorato. Iyo saamaynta gubanaya waa mid aad u la yaab leh.
Ka hor inta soo socda hage hoos ku qoran, waxaad u baahan tahay si ay u gudbiyaan aad iPad mini 2 videos in disk drive your computer ee. Dadka isticmaala Windows, waa mid aad u fudud loo sameeyo. Si kastaba ha ahaatee, dadka isticmaala Mac u baahan tahay si aad u hesho iPad mini 2 video kala iibsiga qalab poweful inay u dhoofiyaan videos si aad u computer.
1 dar mini iPad 2 videos u DVD Creator
Orod software iyo sida aad ka arki kartaa: guji "Import" in caleenta iyo dooro iPad mini 2 videos aad rabto in aad ku gubi. Kuwani videos daray waxaa lagu soo bandhigaa bidixda sida thumbnails. Keenista Photo waxa kale oo ay taageerayaan. Waxaad si xor ah u arkaan kartaa videos iyo sawiro ku saabsan suuqa kala xaq u arkaysid iyo qabsato video mugga. Bar cagaarka hoose ayaa muujinaysa cabbirka aad video.
2 Tafatir mini iPad 2 videos la dhisay-in editor video
Si kor loogu qaado wax ka bedel iyo video clip ah, waxa aad dooran kartaa oo riix badhanka edit in uu bixiyo suuqa kala Video Edit. Interface waa sida hoos ku qoran: aad si xor ah u astaysto kartaa videos by falinjeeerka, lana siii, qoqobada, isagoo intaa ku daray saamaynta, isagoo intaa ku daray watermarks iyo wixii la mid ah.
Guji "Menu" tab si ay u doortaan macbudka ah DVD menu haboon DVD aad, ka dibna u astaysto sida ku daray music soo jeeda, personalizing thumbnails iwm Dabcan, aad dooran kartaa No menu ka mid ah liiska. Haddii aad rabto in aad hesho in ka badan arrimo free menu , riix badhanka cagaaran arrow inaad kala soo baxdo kuwa aad jeceshahay goobta rasmiga ah.
4 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo gubi mini iPad 2 video inay DVD
Tag ah "Kulanka Xiisaha Leh" tab in ay ku eegaan aad mashruuca. Marka aad ku qanacsan tahay la, u tag "Guba", doortaan qaab wax soo saarka iyo koobin, ka dibna aad riix karaa "Guba" badhanka si ay u bilaabaan gubanaya.
Fiiro gaar ah: Haddii size mashruuca DVD aad ka weyn tahay 4.7G iyo aad u lahayn disc DVD9, kaliya geliso disc D5 ah halkii, abuure DVD si toos ah u cadaadin doonaan.